ny fitsipika momba ny fifandraisana amin'ny ny Sinoa ny vehivavy Aziatika tokan-tena andro Bilaogy
ny fitsipika momba ny fifandraisana amin’ny ny Sinoa ny vehivavy Aziatika tokan-tena andro Bilaogy
Ao Shina, rehefa matanjaka ny fifandraisana eo amin’ny fifandraisana dia nandrasana ary ny zava-mahazatra ho an’ny mpiara-miasa mba hiteny mandritra ny andro. Mety ho dikan’izany ianao fifanakalozana tsy tapaka hafatra an-tsoratra amin’ny ny Sinoa ny vehivavy, ary koa ny miantso azy roa fotoana nandritra ny andro. Tsy ho gaga ianao raha toa ka ny mpiara-miasa andinin-teny imbetsaka tamin’ny maraina ihany.
Ny vehivavy Sinoa dia manantena azy ny olona mba ho amin’ny fanapahan-kevitra ny mpanao ao amin’ny fifandraisana. Indray, izany no fomban-drazana ao an-tanindrazana, ary noho izany, rehefa mandeha avy eo amin’ny daty efa tena mazava drafitra ny toerana misy anao, dia mandehana, ary inona no atao. Raha toa ka ny mpiara-miasa no hanolotra hevitra ianao, dia tokony hanaja azy ireo mazava ho azy, fa aoka ho vonona foana hanao ireo fanapahan-kevitra manan-danja. Fomba nentim-paharazana any Shina, ny maha-akaiky alohan’ny fanambadiana no tena mahazatra. Na izany aza, ao urbanized sehatry ny firenena, izany no miova. Na izany na tsia, raha toa ianao ka akaiky amin’ny ny Sinoa ny vehivavy raha mampiaraka, dia afaka matoky fa izy no mahita ny fifandraisana amin’ny maha-lehibe iray. Mifamatotra ao amin’ny fitsipika ambony, dia tsara ny mahafantatra fa ao Shina, ny fanambadiana, no tena tanjona. Ny vehivavy Sinoa dia efa mafy fanamafisana ny fanambadiana, ary raha toa ka ianao ho akaiky raha mampiaraka, dia ny mpiara-miasa dia ny ankamaroan’ny tena mihevitra ny fanambadiana ho amin’ny karatra. Ny vehivavy Sinoa dia mety ho voasariky ny olona izay manana fototra mafy orina. Noho izany, dia midika fa izy dia manana ny asany, ny trano sy ny fiara. Araka ny fomban-drazana any Shina, amin’ny daty Shinoa ny vehivavy dia matetika no mitondra ny namana azy, azo antoka fa mba vitsivitsy voalohany ny fivoriana tamin ny lehilahy iray. Izany dia fanomezan-toky ny zavatra sy ny buffer izy raha mahazo ny mahafantatra ny olona tsara. Noho izany, tsy mandray izany ho toy ny na inona na inona ny ompa ny vehivavy mitondra namana miaraka aminy. Raha miresaka dia lasa kely cheap amin’ny tany Tandrefana, ity dia azo antoka fa tsy ny raharaha ao Shina. Raha ny Shinoa vehivavy milaza aminao izy fa tia, malahelo na tena tia anao, mihevitra izany mba ho tena fanambarana ny fankasitrahana ho anao.
Vehivavy shinoa tsy mampiasa io fiteny io ho afa-maina
Izany dia mampino fitsipika manan-danja rehefa ao amin’ny fifandraisana amin’ny vehivavy Sinoa. Raha toa ianao ka lehibe momba ny fifandraisana maharitra amin’ny mety ho an’ny fanambadiana, ny mpiara-miasa tokony hahafantatra izany.
Angamba zava-dehibe kokoa, raha ianao ihany rehefa aria e
mety fifandraisana amin’ny firaisana ara-nofo, tsy maintsy manao izany mazava hatrany am-boalohany. Ny alina iray mijoro dia tsy fahita firy amin’ny Sinoa maro ny vehivavy, ka ho azo antoka izy ireo hahafantatra izay anananao ao an-tsaina avy amin’ny tany am-boalohany-tsehatra. Raha ny vehivavy Sinoa dia niteny taminy ireo ray aman-dreny ny momba anao, dia azo antoka fa dia mahita ny fifandraisana amin’ny maha-tena lehibe. Ny vehivavy Shinoa dia afa-mampiditra ny olona ho any ny ray aman-dreniny, raha ny fanambadiana eo amin’ny karatra. Noho izany, raha toa ka tsy mahita ny fifandraisana mitarika mankany amin’ny andraikitra, tokony tsy fivoriana ny ray aman-dreniny
← Mampiaraka Sinoa vavy
Mampiaraka ao Shina ireo Shinoa ny Fiarahana Maneho sy ny Toro-hevitra →